“Way xanuun badan tahay inaan arko Messi oo baxaya, laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan ku arko Premier League.” Xiddig hore Barcelona ah – Gool FM
(Barcelona) 25 Feb 2021. Xiddigii hore kooxda Barcelona ee Rafael Márquez ayaa ka hadlay suurtagalnimada uu Lionel Messi uga tagi karo garoonka Camp Nou dhamaadka xilli ciyaareedka haatan socda.
Qandaraaska Lionel Messi wuxuu dhacayaa dhamaadka xilli ciyaareedkan, halka qandaraaskiisa aan dib loo cusbooneysiinin illaa iyo haatan, halka wararka ay sheegayaan inuusan wax go’aan ah gaari doonin kahor dhamaadka xilli ciyaareedkan, waxaana magaciisa lala xiriirinayaa inuu u dhaqaaqayo kooxaha Paris Saint- Germain ama Manchester City.
Haddaba Rafael Márquez ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu kaga hadlay suurtagalnimada uu Lionel Messi uga tagi karo garoonka Camp Nou, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Wuxuu bixiyay waxqabadkiisii ​​ugu fiicnaa sanad walba waana wax aad u xanuun badan inuu ka tago Barcelona, wali lama hubo inuu bixi doono iyo inuu sii joogi doono, weyn fiicnaan lahayd haddii uu sii joogo ilaa iyo dhamaadka xirfadiisa ciyaareed.”
Inkastoo uu jecelyahay in Messi uu sii joogo kooxda Barcelona ilaa iyo dhamaadka xirfadiisa ciyaareed ee kubadda cagta, hadana Rafael Márquez ma uusan qarinin rabitaankiisa ah inuu arko Leo oo ka ciyaara horyaal kale, gaar ahaan Horyaalka Ingiriiska, wuxuuna yiri:
“Haa, waxaan jeclaan lahaa inaan ku daawado isaga horyaal kale, horyaalka aan dalban lahaa, waa sida Premier League.”
Edgar Badia kaddib markii uu maaliyada ka badashay Messi: “Haa, waan la yaabay, laakiin ...”